Yakagadzirirwa kutarisa nguva paApple Watch yake panguva yekumira | Ndinobva mac
Ndozvatove izvo isu vedu vanotyaira neApple Watch zvaive zvisipo sezvo chiri chinhu chakajairika uye chine musoro kuita kana iwe uinacho. Kana iwe ukaunza yako Apple Watch pfeka uye urikutyaira, kutarisa nguva yaunofanira kungosimudza ruoko rwako woitendeutsa kuitira kuti chidzitiro chayo chinotendeuka choga uye ini ndinokuratidza iyo dial pamwe nenguva.
Ichi chiito kana ukachiita masikati chinoenda chisingazivikanwe, asi kana uchizviita husiku uye kunyangwe uchimirira mwenje wemugwagwa kuti ushanduke kuve girini, screen glare inogona kutamba hunyengeri.
Mumwe mutyairi wechikadzi muCanada abhadhariswa faindi, sekureva kwemupurisa, nekucherechedza kuti paive nefoni mbozha yaipenya mukati memotokari padanho redhiraivhi paakamirira pachiteshi. Mutyairi aive parobhoti akamirira kushandura girini kuti aenderere mberi kufora kwake paakatenderedza ruoko rwake kutarisa nguva.
Iyo Apple Watch yakavhura skrini yayo uye rombo rakaipa nderekuti panguva iyoyo chaiyo mupurisa akaona kupenya, mushure meizvozvo akagadzirira faindi yakanaka yekushandisa nharembozha achityaira.
Mutyairi, Victoria Ambrose, akamiswa pamwenje mutsvuku apo mupurisa akaona "kupenya kwechigadzirwa chemagetsi" mumotokari yake. Rambi rakashanduka kuita green uye mota mbiri pamberi pake dzakaenda kumberi, asi akaramba akamira kusvikira mupurisa abatidza mwenje mumotokari yake. Mupurisa akaenderera mberi nekumusunga ndokumupa faindi.
Mupurisa akaita nharo:
Zvisinei nekuti Apple Watch idiki pane nharembozha, muhumboo, mudziyo wekutaurirana unokwanisa kugamuchira nekutumira data remagetsi. Kunyange ichinge yakanamatira pachiwoko chemumiririri, hachisi chinhu chinokanganisa kupfuura nhare mbozha yakasungirirwa pachirugu chemumwe munhu.
Chokwadi ndechekuti chinzvimbo ichi hachinzwisisike uye ndechekuti dai chiine imwe mhando yewachi yaizoita nenzira imwecheteyo.Iwe unofungei nezve izvi zvese?
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » Yakagadzirirwa kutarisa nguva paApple Watch yake panguva yekumira
Mumaawa mashoma anotevera Apple inogona kuzivisa yayo nyowani Yekutsvagisa Triangle Park kembasi